Ndiyakuvuyela u-BRUCE ubuya eCambodia!
Ngobhubhani obukrakra ekhaya nakumazwe aphesheya, ukuze kugqitywe ukufakwa kunye nokuqeqeshwa kwenkqubo yolawulo lwabathengi baseKhambodiya. UBrcece, injineli yezobuchwephesha ephethe iLANDWELL, uthathe isigqibo sokuya eCambodia ukusombulula ingxaki yasemva kokuthengisa kweJIN BE ...Funda ngokugqithisileyo »
Imveliso ekrelekrele yase China, kunye nempumelelo enkulu! Amakhulu eekhabhathi eziphambili zentloko ziya eTurkey
Ekuqaleni kwalo nyaka, ngesiquphe ubhubhane wesifo semiphunga obangele ukuba iinkampani ezininzi zikwimeko enzima kwaye ecothayo yokuqalisa kwakhona komsebenzi, nto leyo eyacothisa isantya sophuhliso lwezentlalo nezoqoqosho. KUMHLABA, nokuba kunzima kangakanani, kufuneka yenze yonke imizamo yokukhuthaza iR & D a ...Funda ngokugqithisileyo »
19 Iimveliso eziTyikityiweyo eziKhulu zeCostco Kirkland zokuThenga iiholide
Ukuba uziva umoya weholide kwaye ubulungu bakho beCostco bukhawuleza, uyakufumana amathuba amaninzi okuphawula iimpahla zeholide, ukusuka kwizipho ukuya kukutya kwetheko lendlu, kumaxabiso entengo kwiklabhu yokugcina. Ngokukodwa, uninzi lweCostco's Kirkland Signature-branded p ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni isitshixo sam singavuli iqhaga?
Nceda uqaphele indawo ephawulwe ngesangqa esibomvu njengoko kubonisiwe kumzobo. Ezi ndawo zimbini zingwevu kufuneka zisuswe kuqala. Kwaye emva koko izikrufu kufuneka zingakhutshwa ngeli xesha, iqhaga linokuvulwa ngokulula ngesitshixo sakho. Kutheni le nto yenziwe ngoluhlobo? Kuqala ...Funda ngokugqithisileyo »
Abadlali abaphambili kwinkqubo yolawulo lwesoftware yekhompyuter (i-CMMS) kwimveliso yesoftware kwintengiso yezempilo kwi2020, iintsingiselo, ukuthengisa, ukubonelela, imfuno, uhlalutyo kunye noqikelelo ku2026 | IBM, ulondolozo ...
“Ingxelo yoPhando yakutshanje: Isoftware yoLawulo lweNkqubo yokuLungiswa kweKhompyuter (i-CMMS) kwiNtengiso yezeMpilo kwi2020 ″ I-RnM isandula ukufaka ingxelo yophando ngenkqubo yesoftware yolawulo lwenkqubo yekhompyuter (i-CMMS) kwintengiso yezempilo, emele isifundo ukusukela ku-2020 ukuya ku-2026. Th ...Funda ngokugqithisileyo »
Abaphembeleli bemozulu bafuna uBiden ukuba abenqabe abantu abanxulumene ne-fuels
Ngosuku olulandelayo emva konyulo, amatshantliziyo emozulu abhikisha eWashington, DC. Ezinye iinkqubela phambili zinethemba lokuba umongameli-onyuliweyo uBiden uza kuqhakamshela nakuphi na ukuqeshwa kwezibaso. Bloomberg / Bloomberg fihla i-caption nge-Getty Izithombe Ngosuku olulandelayo emva konyulo, amatshantliziyo emozulu abhikisha eWashington, D ...Funda ngokugqithisileyo »
Ibhokisi yoKhiye woLawulo, IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, IKhabinethi ephambili etshixwayo, Ibhokisi ephambili ejingayo, IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo,